ကမ္ဘာကြီးဟာ လုံးသလား...ပြားသလား - YOYARLAY Digital Media and News
ခေတ်သစ်သိပ္ပံကို အယုံအကြည်မရှိသူတစ်စုကတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ စက်ဝိုင်းပုံစံမဟုတ်ပဲ အပြားကြီးပါ လို့ သက်သေပြဖို့အတွက် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကို လေ့လာရေးခရီးထွက်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဆုံး၊ အနားသတ်ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
You Tube ပေါ်မှာ အင်မတန်အငြင်းအခုန်သန်တဲ့ နာမည်ကြီးတွေထဲက လိုဂန်ပေါလ် (Logan Poul) ဆိုသူကတော့ ကမ္ဘာကြီးပြားကြောင်သက်သေပြဖို့ တောင်ဝန်ရိုးစွန်းကို လေ့လာရေးခရီးတစ်ခုထွက်သွားဦးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ကို (Documentary) ခရီးသွားမှတ်တမ်းအဖြစ်ရိုက်ကူးဦးမှာဖြစ်ပြီး ”ကမ္ဘာကြီး၏ အစွန်းသို့ အသွားအပြန်ပြုလုပ်ခြင်း” လို့ အမည်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူဟာ မကြာသေးမီကမှ ဒန်ဗာ (Denver) မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ကမ္ဘာပြားခြင်းယုံကြည်သူများဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သူလို့ပဲနှစ်နှစ်ကာကာယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရော်ဘီဒက်ဘီဆင် (Robbie Davison) နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။
သူက ” ကျွန်တော်နာမည် လိုဂန်ပေါလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာကြီးပြားတယ်လို့ ယုံကြည်ရတာကို ကျွန်တော် မရှက်ပါဘူး။ ဒါကိုယုံကြည်လို့ ကျွန်တော့ကို တစ်မျိုးမြင်ကျတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အချင်တွေရှိပါတယ်။ နှစ် (၅၀) အတွင်းလပေါ်ကို ထပ်မသွားနိုင်သေးတာဘာ့ကြောင့်လဲ? လဟာ အရင်တုန်းကသိထားသလို နေရဲ့ အလင်းကို အရောင်ပြန်တာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်နေလို့လား? ထင်ရှားတဲ့ အချိ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ နေးလ်ဒက်ဂရက်တိုင်လ်ဆင် (Neil Degrasse Tyson) တို့၊ ဘေးလ်နီးလ် (Bill Nye) တို့ ဆိုရင် ကမ္ဘာဆွဲငင်အားအကြောင်းတွေ ဘာတွေဆို သူတို့သေချာတောင်သိရဲ့လားမသိပါဘူး”လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော် မယုံတာ မဆန်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်စိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီး ဖြစ်လာသမျှကို လက်ခံကြိုဆိုချင်တာပါ။ ကမ္ဘာပြားယုံကြည်မှုဟာ အနည်းငယ်တော့ ရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတဲ့ အချက်တွေကို ဆက်လက်ယုံကြည်ဖို့တော့ တွန့်ဆုတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး” လို့ထပ်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
ရော်ဘီဒက်ဘီဆင် (Robbie Davison) ကတော့ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိပ္ပံပညာနဲ့ယှဉ်တဲ့အမြင်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ”တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကနေ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့အမြင်တွေပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ သောင်ပြင်ကြီးလို အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ရေခဲပြင်တွေကလွဲပြီး ဘာကိုမှ မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ အဲဒီနေရာကို မရောက်ဖူးပဲနဲ့ ဒီကနေထိုင်ပြီး ရမ်းပြောနေလို့မရပါဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့တွေဟာ ကမ္ဘာပြားတယ်လို့ယုံကြည့်ပေမယ့် (တစ်နည်းအားဖြင့် မှားနေပေမဲ့) အရာရာကို အလွယ်တကူ ယုံကြည်ပစ်လိုက်တဲ့သူတွေ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုသွားရင်းနဲ့ သူတို့ပြောသလို ကမ္ဘာကြီးက တကယ်ပြားနေခဲ့ရင်တော့ အစွန်းကနေ သူတို့ ပြုတ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
Ref: Independent ”The next step of Flat Earthers is an Expedition to the Antarctic-to find the edge of the world”
Previous Previous post: မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုတို့ရဲ့ ပထမဆုံးများ
Next Next post: ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရအခြေတည်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစစ်ရဲ့ အရည်အသွေး (၄) ရပ်
ကမ္ဘာပေါ်ကလူများဟာ အရင်ကလောက် ကလေးမမွေးကြတော့ပါဘူး။ The Lancet က ၁၉၅၀ ကနေ ၂၀၁၇ အတွင်းက ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မျိုးအောင်မှုစစ်တမ်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စစ်တမ်းပါအချက်အလက်များအရ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အရင်ကထက် များစွာလျော့နည်းပြီး ကလေးမွေးလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။…
Published: August 8, 201910:20 am Updated: 10:26 am